Fanasana KTLM FEO IRAY LIMOGES - Sabotsy 08 desambra 2018 - Fiangonana FLM Orléans Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Am-pifaliana no andraisantsika ity fanasana ity ary aely mivelatra ho an’ny kristiana rehetra eto amintsika. Andao!
Noho ny fitsingeren-taonan’ny KTLM FEO IRAY LIMOGES, dia faly izahay manasa anareo FLM ORLEANS hanatrika ny hetsika karakarainay: « Concert accompagné d’un apéritif dînatoire », izany dia ho tanterahina ny Sabotsy 08 desambra 2018 amin’ny 06 ora sy sasany hariva ao Limoges.
Ny alahady kosa dia hisy ny fotoam-pivavahana sy fiaraha-misakafo.
Ny vola rehetra izay azo amin’io fotoana io dia ho hatolotra ho an’ny fiangonana ho fanampiana azy amin’ny fanamboarana alitara vaovao, koa manantena antsika rehetra mba handray anjara, hanotrona ary hitondra am-bavaka io fotoana io fa zavadehibe loatra ho anay izany.
Ny fivarotana tapakila dia efa misokatra koa afaka mamandrika toerana amin’ny mail ktlm.limoges@gmail.com ianareo, na amin’ny pejy facebook ny KTLM FEO IRAY, na amin’izay mpivavaka FLM Limoges mifanandrify aminareo.
Manantena ny fahatongavantsika maro,
Komity KTLM LIMOGES
Ny tapakila dia efa azo jifaina ETO